Faahfaahinta Shirkadda - Shandong Yuqiang Hardware Products Co., Ltd.
Shandong Yuqiang Hardware Products Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2003. Waxay ku taallaa Chengxi Industrial Park, Leling City, Gobolka Shandong, iyo xarunteeda iibintu waxay ku taal Qingdao. Waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo isku dhafan R&D, wax soo saarka iyo iibinta albaabka dhismaha iyo qalabka daaqada.
Badeecadaha ugu waaweyn waa aluminium-caag ah oo gudaha, gudaha iyo dibaddaba rogay, daahyada furitaanka derbiga qalabka daaqadda; qalabka dab -damiyaha dab -damiyaha qalabka nidaamka daaqadda, furitaanka daaqadda korontada, hawo -mareyaasha, iwm.
Waxaan samaynay cilmi-baaris iyo horumarin, naqshadeyn, wax-soo-saarka caaryada, shubka, shaabadaynta, daaweynta dusha iyo isu-imaatinka sida nidaamka wax-soo-saarka hal-joogga ah.
waxaan leenahay awood wax soo saar oo ka badan 1.5 milyan oo gogo '(gogo'). Warshadu waxay dabooshaa baaxad dhan 50,000 mitir murabac; tirada guud ee shaqaalaha shirkadda waxay kor u dhaafeysaa 350, kuwaas oo in ka badan 90 ay yihiin shaqaalaha maamulka iyo farsamada.
Alaabtayada waxaa loo adeegsadaa in ka badan 172 mashaariic injineernimo, waxayna sii wadatay xiriir iskaashi oo wanaagsan oo muddo dheer leh in ka badan 200 qandaraasle dhisme sida Beijing Zhong jian ji ye, Qingdao Lu Cheng, Maamulka Dekadda Qingdao, China Sinopec, China Power, Kooxda Huan qiu, Beihai Jiandui, iwm, oo leh Teknolojiyad horumarsan, tayo badeecad aad u fiican iyo adeeg iib-gadaal oo aad u fiican, kaasoo ku guuleystay kalsoonida iyo ammaanta macaamiisha.
Faa'iidooyinka Alaabta Hardware ee Yuqiang:
Alaabta ceeriin oo la hagaajiyay, ayaa labanlaabtay awoodda dhalidda